Vao Mainka Aho Nihanahery Setra | Manova Olona ny Baiboly
Ny Tilikambo Fiambenana | Jolay 2015
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Bashkir Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Cinyanja Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Frantsay Ga Galoà Garifuna Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Koreanina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Masedonianina Maya Mooré Myama Ndebele Ndonga Ngabere Niue Norvezianina Nyaneka Nzema Okpé Oromo Ossète Otetela Ourdou Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa (Shanghaï) Sinoa (Yunnan) Sinoa Kantôney Notsorina Sinoa Sichuan Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Talian Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Totonac Tseky Tshiluba Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Valencienne Venda Vietnamianina Wallis Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Notantarain’i Stephen McDowell
FIAINANY TALOHA: NAHERY SETRA
Lehibe tany amin’ny faritra be andian-jiolahy tany Los Angeles, any Etazonia, aho. Niparitaka koa ny zava-mahadomelina tany. Izaho no faharoa aminay enina miana-dahy.
Nentin’i Neny nivavaka tany amin’ny Fiangonana Ara-pilazantsara izahay. Naditra anefa aho rehefa nihalehibe. Nihira tao amin’ny antoko-mpihiran’ny fiangonana aho rehefa alahady. Ilaozako mamonjy fety sy midoroka zava-mahadomelina ary mijangajanga kosa mandritra ny herinandro.
Mora tezitra aho sady nahery setra. Izay sendra ny tanako dia nampiasaiko hamelezana olona. Tsy nisy vokany tamiko akory ny zavatra nianarako tany am-piangonana. Izao ihany ny ahy: “An’ny Tompo ny famaliana, fa izaho no ampiasainy!” Liana tamin’ny fikambanana ara-politika iray (Black Panthers) niady ho an’ny zon’ny olom-pirenena aho, taloha kelin’ny 1970, tamin’izaho teny amin’ny lise. Niditra tamin’ny fikambanan’ny mpianatra miaro ny zon’ny olom-pirenena àry aho. Nakatonay foana ny sekolinay isaky ny nitarika fihetsiketsehana izahay.
Tsy nahafa-po ahy ny fihetsiketsehana nataonay ka nanao heloka bevava noho ny fankahalana aho. Nisy fotoana, ohatra, izahay sy ny namako mandeha mijery sinema. Filma momba ny fampijaliana andevo afrikanina tany Etazonia no nojerenay. Tezitra izahay ka nidaroka fotsy hoditra tao amin’ilay fijerena sinema. Nankany amin’ny tanànan’ny fotsy hoditra izahay avy eo, mba hamely olon-kafa.
Lasa mpanao heloka bevava izaho sy ireo rahalahiko tamin’izaho 20 taona teo ho eo. Nenjehin’ny polisy foana izahay. Mpikambana tao amin’ny andian-jiolahy malaza ny zandriko iray ka niaraka tamin’izy ireo aho. Vao mainka aho nihanahery setra.
Zanaka Vavolombelon’i Jehovah ny namako anankiray. Nasain’izy ireo hivory tany aminy aho dia nanaiky. Tonga dia hitako hoe hafa mihitsy ny Vavolombelona. Nanana Baiboly ny rehetra sady nampiasa an’ilay izy nandritra ny fivoriana. Na ny tanora aza nanao anjara teny aloha. Gaga aho rehefa nahalala hoe Jehovah no anaran’Andriamanitra sady ampiasain-dry zareo ilay izy. (Salamo 83:18) Samy hafa koa ny fiavian’ny olona tao, nefa tsy nifanavakavaka ry zareo.
Nahafinaritra ahy ny nivory tany amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Tsy te hianatra Baiboly tamin’izy ireo anefa aho tamin’ny voalohany. Nivory tany aho, indray hariva, fa ireo namako kosa nandeha nijery fampisehoana. Nisy ankizilahy nanana palitao hoditra tany, dia novonoin’izy ireo ka maty mihitsy satria tsy nety nanome an’ilay palitao. Nirehareha erỳ ry zareo nitantara an’ilay izy ny ampitson’iny. Nihomehezany fotsiny aza ilay izy rehefa notsaraina ry zareo. Nigadra mandra-pahafatiny ny ankamaroany. Soa ihany aho fa tsy niaraka tamin-dry zareo. Tapa-kevitra aho fa hiova ka nianatra Baiboly.
Niaina tao anatin’ny fanavakavahana aho taloha ka gaga rehefa niaraka tamin’ny Vavolombelona. Tsy maintsy nankany an-tany hafa, ohatra, ny Vavolombelona fotsy hoditra iray ary nasainy nokarakarain’ny fianakaviana mainty hoditra aloha ny zanany. Nalain’ny fianakaviana fotsy hoditra iray hipetraka tao aminy koa ny ankizilahy iray mainty hoditra tsy nanan-kialofana. Niaiky aho fa ny Vavolombelon’i Jehovah no manatanteraka ny tenin’i Jesosy ao amin’ny Jaona 13:35 hoe: “Raha mifankatia ianareo, dia izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro ianareo.” Tena nahatsapa an’io fifankatiavana io tokoa aho rehefa niaraka tamin-dry zareo.
Rehefa nianatra Baiboly aho dia fantatro hoe mila manova ny toe-tsaiko. Tsy maintsy miova aho mba ho tia fihavanana sy hiaiky hoe izay mihitsy no tokony hataoko. (Romanina 12:2) Nandroso tsikelikely aho ary lasa Vavolombelon’i Jehovah tamin’ny Janoary 1974, rehefa natao batisa.
Tsy maintsy miova aho mba ho tia fihavanana sy hiaiky hoe izay mihitsy no tokony hataoko
Na dia vita batisa aza aho dia tsy maintsy niezaka mba tsy ho mora tezitra. Nitory isan-trano izahay, indray mandeha. Nisy nangalatra anefa ny radion’ny fiarako ka lasa nanenjika an’ilay mpangalatra aho. Rehefa akaiky ho tratrako izy dia natsipiny ilay radio. Notantaraiko tamin’ireo niaraka nitory tamiko izany. Nanontany ahy anefa ny anti-panahy iray hoe: “Stephen a, dia nataonao ahoana izy raha tratranao?” Tonga saina aho ka tapa-kevitra hoe hiezaka kokoa ho tia fihavanana.
Lasa mpitory manontolo andro aho tamin’ny Oktobra 1974 ka nampianatra Baiboly adiny 100 isam-bolana. Niasa an-tsitrapo tany amin’ny Foiben’ny Vavolombelon’i Jehovah any Brooklyn, any New York, aho tatỳ aoriana. Niverina tany Los Angeles aho tamin’ny 1978 mba hikarakara an’i Neny satria narary izy. Nanambady an’i Aarhonda aho, roa taona taorian’izay. Tena nanampy be tamin’ny fikarakarana an’i Neny izy mandra-pahafatin’i Neny. Nanatrika ny Sekoly Ara-baibolin’i Gileada izahay tatỳ aoriana. Voatendry ho misionera teto Panama izahay ary mbola eto hatramin’izao.
Imbetsaka aho no sendra zavatra mety ho nahatonga ahy hahery setra, taorian’ny batisako. Tsy maintsy niala aho rehefa nisy nila ady tamiko, na niezaka nandamina an’ilay izy tamin’ny fomba hafa. Nidera ahy ny vadiko sy ny olon-kafa rehefa nahita ny nataoko. Izaho koa aza mba gaga! Tsy mirehareha momba an’izany anefa aho. Hitako kosa hoe ny Baiboly no tena manova olona.—Hebreo 4:12.
Ny Baiboly no nahatonga ny fiainako hisy dikany sy nampianatra ahy ho tia fihavanana. Tsy mandratra olona intsony aho izao fa manampy azy ireo ho sitrana ara-panahy. Nampianariko Baiboly mihitsy aza ny ankizilahy iray fahavaloko teny amin’ny lise! Nisy fotoana izahay niray trano rehefa vita batisa izy ary mbola mpinamana be izahay hatramin’izao. Olona 80 mahery no nampianay mivady ho lasa Vavolombelon’i Jehovah hatramin’izay.
Tena mankasitraka an’i Jehovah aho satria lasa misy dikany ny fiainako, sambatra aho, ary mana-namana be dia be mifankatia.
Hizara Hizara Vao Mainka Aho Nihanahery Setra
MATOAN-DAHATSORATRA Betsaka ny Zavatra Mampanahy ny Olona
MATOAN-DAHATSORATRA Manahy Momba ny Vola
MATOAN-DAHATSORATRA Manahy Momba ny Fianakaviana
MATOAN-DAHATSORATRA Manahy Momba ny Loza
MANOVA OLONA NY BAIBOLY Vao Mainka Aho Nihanahery Setra
Afaka Mampifaly An’Andriamanitra ve Isika?
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA Manahy Be Loatra ve Ianao?
Hizara Hizara NY TILIKAMBO FIAMBENANA Manahy Be Loatra ve Ianao?
Manahy Be Loatra ve Ianao?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Manahy Be Loatra ve Ianao?